राष्ट्रपति नचिन्ने सुन्दरीहरू « Loktantrapost
राष्ट्रपति नचिन्ने सुन्दरीहरू
१४ चैत्र २०७२, आईतवार ०८:३९
व्यूटी कन्टेस्ट अहिले एउटा नियमित आयोजना नै हुँदै गएको छ । केही बर्ष अघिसम्म काठमाडौँ केन्द्रीत त्यो पनि ‘मिस नेपाल’का नाममा मात्र हुँदै आएको व्यूटी कन्टेस्ट हिजो आज अन्य फरक फरक बिधा र नाममा हुने गरेका छन् । मिस नेवा, मिस राजबंशी, मिस तमु, मिस टिन, मिस झापा, मिस इलाम, मिस एसएलसी जस्ता थुप्रै नामबाट व्यूटी कन्टेस्ट हुँदै आएका छन् । व्यूटी कन्टेस्टलाई नेपालीमा सुन्दरी प्रतियोगिता भनिए पनि यस्ता खालका आयोजनाहरूमा नेपाली शब्दलाई खासै प्राथमिकता दिएको पाइदैँन । अझ त्यसमा सहभागीहरूले नेपाली शब्दले मान मर्दन नै गर्छ कि जस्तो गरी प्रस्तुत हुने संस्कृति पनि बढ्दै गएको छ ।
व्यूटी कन्टेस्ट आयोजना गर्नु महिलाहरूलाई क्षमता विकासका दृष्टिले स्वागतयोग्य मान्नु पर्छ भनेर महिला अगुवाहरूले भन्ने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा त्यस खाले प्रतियोगितामा सहभागीहरूलाई विभिन्न खाले तालिमहरू दिएर क्षमतावान बनाउन प्रयास पनि गरिन्छ । तर, यस आलेखमा उठान गर्न खोजिएको कुरा के मात्र हो भने व्यूटी कन्टेस्ट भनेर आयोजना गरिएका कार्यव्रmमहरूको प्रस्तुतिकरण र त्यसमा सहभागीहरूको वौद्धिक क्षमताको विषयमा उठ्ने गरेका प्रश्नको जवाफ अब खोज्ने बेला भयो कि भएन भन्ने नै हो ।
भर्खर कै प्रसङ्ग हो । इलाममा जारी ‘मिस इलाम’को पहिलो चरणका सहभागीहरूलाई निर्णायकहरूमध्येका मुख्य निर्णायकले नेपालको वर्तमान राष्ट्रपतिको नाम के हो भनेर प्रश्न गर्दा ३५ जनाको सहभागिता रहेको उक्त कार्यव्रmमका धेरै सहभागी सुन्दरीहरूले त ‘थाहा छैन’ भन्ने नै उत्तर दिए भने केहीले गलत उत्तर दिए । त्यतिका सुन्दरीहरूको भीडबाट जम्मा एक जनाले मात्र सही उत्तर दिएको तथ्य हाम्रा सामु छ ।
यसो भनिरहँदा सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी सुन्दरीहरूले सबै विषयको जानकारी राख्नु पर्छ भन्ने मेरो आशय होइन । तर, त्यस्ता केही विषय र प्रसङ्ग हुन्छन् जुन अहिलेका हरेक युवा पुस्ताले जान्नु जरुरी छ । सुन्दरी प्रतियोगिता भन्ने वित्तिकै सबै सहभागी महिला नै हुने भए अनि नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुनु हुने व्यक्तिको नामसम्म पनि थाहा नहुनुमा प्रतियोगिता आयोजकहरूको मात्र दोष होइन । यो त हाम्रो विद्यालय शिक्षा, उच्च मावि तहको शिक्षा र हाम्रा घरहरूको शैक्षिक वातावरणको पनि दोष मान्नु पर्छ ।
क्षमता प्रस्फुष्टनका हिसावले केही थान रङ्गी विरङ्गी लुगा लगाएर कम्मर मर्काउँदैमा क्षमता भएको मान्ने अनि अनुहार र शरीरको बाहिरी आवरणलाई मात्र सुन्दरताको कसीमा राखेर प्रतियोगिताको बिजेता छनौट गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसले एकै पटकमा दुईवटा हिंसा गरिरहेको छ । एउटा समाजको जुन वर्गले यस्ता खाले प्रतियोगितामा क्षमता र सुन्दरता भएर पनि आर्थिक अभावले सहभागी हुन पाउँदैनन् । किनकि व्यूटी कन्टेस्टका नाममा हुने यस्ता सुन्दरी प्रतियोगिता अत्यन्त महँगा र विलासी जीवनशैलीमा केन्द्रीत हुने गरेका छन् । जसबाट थाहा हुन्छ कि यसमा बहुसङ्ख्यकले सहभागिता जनाउनबाटै वञ्चित हुन्छन् ।
दोस्रो भनेको राम्रो भनेर हाम्रो समाजले व्याख्या गरेकादेखि बाहेक बाहिरी आवरण राम्रो नदेखिने भनिएका महिलाहरू के सुन्दरी होइनन् त ! सुन्दरता भनेको बाहिरी रुप मात्रै हो त ! त्यसले सहभागी हुन नसक्नेहरूलाई कुरुप भनेर गाली त गरिरहेको छैन ? के यो हिंसाको रुपमा पर्दैन ? यहाँनेर हाम्रो समाजले चित्तबुझ्दो जवाफ पाएको देखिदैन ।
त्यतिमात्र होइन व्यूटी कन्टेस्टका बिभिन्न बिधामा बिजेता बनेका सुन्दरीहरूले आजसम्म समाज रुपान्तरणमा कति भूमिका खेले त ? उनीहरूको उपस्थितिले यो समाजको अग्रगमनमा के कति योगदान दिएको छ त ? या भनौँ प्रतियोगिता सकिएसँगै बिजेता र सहभागीहरूको जिम्मेवारी सकिएकै हो त ? एउटा औपचारिकताबाट अब्बल ठहरिएकाहरूबाट यो समाजले अन्य केही आशा र भरोसा पनि गर्न पाउने कि नपाउने ? योतर्फ व्यूटी कन्टेस्ट आयोजक मात्र होइन त्यसको प्रभावमा रहेको सिङ्गो समाजले नै गम्भीर भएर बेलैमा नसोच्ने हो भने त्यसले हाम्रो सन्ततिलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ धकेलिरहेको छ । त्यसैले यस्ता व्यूटी कन्टेस्टलाई समाज रुपान्तरणसँग जोड्ने गरिका कार्यव्रmम तय गर्नु अबको आवश्यकता बनेको छ ।